Faroole oo sheegay in dowlada Soomaaliya ay Shabaabkii ku khasabtay in dhanka Puntiland ay isugu aruuraan! |
Cabdi Raxmaan Faroole ayaa kadib kulan uu R/wasaaraha Soomaaliya kula qaatay xaruntiisa Garoowe, waxa uu ka hadlay dhibaatada ay Shababka ku qabaan isaga oo hoosta ka xariiqay in dowlada Soomaaliya kadib markii ay heshay kaalma Calami ah ay Shabaabkii ku khasabtay in dhanka Puntiland ay isugu luga aruursadaan.
Cabdi Raxmaan Faroole ayaa yiri, “Puntiland cadaw badan ayeey yeelatay. Dowlada Soomaaliyana horay ayeey u laheyd. Laakiin dowlada Soomaaliya caawimaad ayeey u heshay anagga ayeyna nagu soo dhaqaajiyeen. Anaguna waxa aan raadineynaa wax badda xageeda noo dhaafiya”.
Buurta Galgala ee gobalka Bari ee maamulka Puntiland ayaa lasheegaa in ay saldhiga ugu weyn ee Soomaaliya ay ku leeyihiin Xaraka Al-shabaab ee xariirka laleh Al-qaacida kadib markii ay saldhigyadoodii koofurta Soomaaliya xididada u siibeen ciidmada Uganda, Burundi, Ethiopia iyo kuwa dowlada Somaliya.
Al-shabaab waxa ay dhawaan ku dhaarteen in calanka Puntiland ay ku bedeli doonaan Raayada towxiidka ah ee astaanta u ah.